Antananarivo Iray andro, loza efatra, nandriaka ny ra
Antanimena, Ankazomanga, Mandroseza, Anosizato dia samy nahitana lozam-pifamoivoizana nitranga omaly maraina anaty ora telo.
Tovolahy iray no maty tsy tra-drano nipotsaka ny atidohany sy mpandeha an-tongotra telo naratra, teny Ankazomanga, voadonan’ny fiara tsy matahodalana . Nitsoaka avy nandona olona teny Antanimena ity farany nirimorimo izay nitera-doza raha nikasa hiala bisikleta ka nifatratra tamin’ny fiara 306 niantsona amoron-dalana ary nifaoka mpandeha an-togotra. Maty teo no ho eo i Fidy, tovolahy 25 taona mpianatra Ankatso, voadona mafy ary nipotsaka ny atidohany. Nahatezitra ny olona ity toe-javatra ity, ary saika niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka. Tonga ara-potoana anefa ny mpitandro ny filaminana nandray an-tanana ny raharaha satria fiara maromaro mihitsy no tonga teny an-toerana. Nitohana rahateo ny fifamoivoizana ka tsy maintsy nalamina sy narindra araka izay azo natao. Efa nanokatra fanadihadiana momba ity loza ity moa ny mpitandro filaminana.
Ankoatra io, nisehoana lozam-pifamoivoizana ihany koa teny Mandroseza omaly maraina ihany. Fiara fitateram-bahoaka taksibe zotra 194 no nifandona tamin'ny moto iray. Tsy nisy ny aina nafoy. Torak’izany koa, fiara sy bisikleta no nifandona teny amin’ny lalan’Anosizato ho any Itaosy ka naratra ilay mpitondra kodiaran-droa. Tena miha mirongatra hatrany ny lozam-pifamoivoizana eto an-drenivohitra sy ny faritra maro noho tandrevaka, tsy fanajana ny toromarika mifehy ny fifamoivoizana, gaboraraka ... Mila fitandremana sy fifanajana ary fanabeazana sy fanajana lalàna izany.
Toky R/ Haja Nirina